Maxaa Sababay is casilaada Saraakiisha ugu saraysa Puntland. | allsanaag
Maxaa Sababay is casilaada Saraakiisha ugu saraysa Puntland.
Shir shalay Kadhacay madaxtooyada Puntland oo looga hadlay arimaha Amniga Puntland ayaa saraakiisha ugu saraysa Ciidamada kulan ay la yeesheen Madaxweynaha Puntland Kulankaaas waxaa fadhiyey lataliyaha Amniga madaxweynaha uqaabilsan Maxamed caddiraxmaan Faroole.
Kadib markii ay warbixin siiyeen madaxweynaha saraakiishu qaabka loo wajahayo difaaca puntland madaxweynaha oo aan jawaabin ayaa waxaa hadalka la booday maxamed cabdiraxmaan Faroole oo saraakiishii u jawaabay hadalo aan munaasab ahayn iyo in aan Maamulka somaliland wax dagaal ah lagu qaadin Taas oo ay ka xanaaqeen saraakiishu Madaxweynuhuna uu ka aamusay.
Ilma faroole iyo Aaran jaan ayaa aaminsan in ay yihiin Mulkiilayaasha iska leh Dowlada, nta badan xukuumada Deni ayaa ah xukuumad Naas iyo Nikaax Maxamuud Shido ku keenay wiilal uu abti u yahay iyo kuwo gabdho ka qaba iyo kuwo ay Qaraabo yihiin
Agaasimaha guud ee Madaxtooyada Puntland ee dhowaan la magcaabay waxaa abti ruma u ah Maxamuud Shido.
← Dagaal ooge Ciise Xawar Yaa qaban kara wiilashan SNM hor boodaya? →
One thought on “Maxaa Sababay is casilaada Saraakiisha ugu saraysa Puntland.”
Haliye March 21, 2019 at 4:25 am
Taliyaha ciidanku Garoowe ma joogin oo Gaalkacyo buu jiray sidii gabadhii caisha loogu dilay marka warkan waa been.